Ahoana ny fomba hifandraisanao amin'ny PC Windows misy birao lavitra avy amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fomba hampifandraisana ny birao lavitra amin'ny solosaina Windows amin'ny Mac
Raha manana solosaina misy rafitra fikirakirana Windows ianao ary miasa ny birao lavitra, azo inoana fa efa nanontany tena ianao raha misy ny fahafaha miditra amin'ilay solosaina amin'ny Mac, satria amin'ny fotoana sasany mety mahasoa ny tsy miasa amin'ny PC misy rindrambaiko an'ny antoko fahatelo, ary hahafahana manao ny fifandraisana mivantana avy amin'ny Mac, toy ny azo atao amin'ny solosaina Windows hafa.
Amin'ity tranga ity, na dia tsy dia mora aza izany satria ny macOS dia tsy manana fitaovana tonga mialoha apetraka ary mamela anao hanao an'io indrindra, ny marina dia afaka manao fifandraisana birao lavitra ianao amin'ny Mac rehetra, ary noho izany dia mila mametraka rindranasa fotsiny ianao.
Mifandraisa amin'ireo solosainao Windows avy amin'ny Mac amin'ny Microsoft Remote Desktop
Araka ny efa noresahintsika, tamin'ity indray mitoraka ity avy amin'ny Microsoft dia tsy nataon'izy ireo sarotra izany ho an'ireo mpampiasa maniry hampiasa ny birao lavitra avy amin'ny Mac, satria namorona rindranasa ho azy izy ireo, izay tena mora ampiasaina sy maimaim-poana ihany koa, na eo aza izany dia manana drawback kely izy, ary izany dia amin'ny teny anglisy ihany no misy.
Na izany na tsy izany, raha te hifandray amin'ny solosainao Windows avy amin'ny Mac, ny zavatra voalohany ilainao dia izao manaraka izao:
Windows PC (aleony Windows 10 hiasa tsara kokoa), namboarina mba hahafahan'ny fifandraisana lavitra amin'ny solosaina hafa.
Ny IP an'ny fitaovana voalaza fa afaka mifandray.
Ny mpampiasa sy ny teny miafiny mifandraika amin'izay tianao hidiranao manokana.
Ny fampiharana Microsoft Remote Desktop amin'ny Mac-nao.
Microsoft Remote Desktopmaimaim-poana
Vantany vao tafangona sy voarakitra tsara ity, ho vonona ny hifandray amin'ny solosainao amin'ny alalàn'ny lavitra ianao, izay ilainao fotsiny ny manaraka ireto dingana manaraka ireto:
Sokafy ny fampiharana Remote Desktop avy amin'ny Mac anao ary kitiho ny manampy kisary, ary safidio "Desktop" (na "Birao" amin'ny teny espaniola). Raha sanatria ka tonga tampoka ilay mpamosavy dia tsy mila manao an'io ianao fa tohizo ny fametahana azy fotsiny.
Any an-tsaha nantsoina "Anaran'ny PC", ampidiro ny adiresy Windows solosaina IP amin'ny fanontaniana tianao hifandraisana, na ny anarana mpampiantrano raha toa ka manana solosaina roa amin'ny fifandraisana tambajotra iray ianao.
Vantany vao vita izany, eo amin'ny sehatry ny "Kaonty mpampiasa", manana safidy roa azo atao ianao, miankina amin'ny tianao manokana:
Avelao izy ho "Manontany ahy isaky ny fotoana", ka isaky ny te hiditra amin'ny solosaina indray ianao dia tsy maintsy ampidirinao an-tanana ny solon'anarany ho fanampin'ny tenimiafiny, izay mety mahasoa raha manana mpampiasa maro noforonina tao amin'ny Windows PC ianao, ary te hifandray isaky ny iray amin'izy ireo dia tsy mitovy.
Mametraha kaonty mpampiasa, ahafahanao mitahiry mpampiasa iray na maromaro hiditra amin'ny solosainao amin'ny fomba haingana kokoa, satria tsy mila miditra amin'ny solonanarana na teny miafina ianao. Raha liana amin'ity ianao dia mila misafidy fotsiny ilay safidy "Add Account Account ...", ary ampidiro ny solonanarana, tenimiafina ary anarana iraisana hampiasaina raha tianao.
Aorian'ity dia mila fotsiny ianao kitiho ny bokotra "Save" (na "Tehirizo" amin'ny teny Espaniôla), ary lisitra dia hiseho ho azy miaraka amin'ireo fitaovana samihafa izay notehirizinao hifandray.
Mila tsindrio fotsiny ilay efa namboarinao ianao, ary afaka segondra vitsy dia halamina ary azonao idirana tsy misy olana, ary raha mandeha tsara ny zava-drehetra dia ampiasao toa ny solosaina Windows ihany, ao anaty varavarankely fotsiny.
Raha vantany vao nahavita an'io ianao, miankina amin'ny kinova Windows napetrakao amin'ny solosaina mifandray aminao, azonao atao ny manamboatra andiana masontsivana avy amin'ny fikirakirana, toy ny mety hitrandrahana azy ho azy ny haben'ny varavarankely, na ny fisafidianana ny fomba itiavanao ny zava-drehetra hijerena ny kalitao, na dia efa safidy aza ireo zavatra miankina amin'ny tsironao manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba hampifandraisana ny birao lavitra amin'ny solosaina Windows amin'ny Mac
Francisco Jose dia hoy izy:
Mety tsara izany, saingy tsy azoko mihitsy ny miasa tsara.
Valiny tamin'i Francisco José
Mahaliana be ilay izy. Raha ny fahitako azy dia tsy misy olana ny tariby raha ny amiko, fa rehefa manonta mampiasa Wi-Fi amin'ny PC hifandray amin'ny mpanonta dia toa misy olana ... Na izany na tsy izany, heveriko fa hisy zavatra hatao. miaraka amin'izany ny famantarana ho an'ny birao lavitra dia alefa amin'ny toerana iray ihany, saingy hoy aho, milaza aho fa amin'ny kinova ho avy ny fampiharana na ny Windows dia ho avy ny vahaolana 😉
Miasa tanteraka izy io fa tsy afaka manonta mampiasa mpanonta amin'ny tariby na wifi, ???
Tsy azoko ny lisitry ny sehatr'asa, ka tsy hitako izay nofidiako mac.
Misaotra betsaka noho ny fanampianao, Misaotra ny famoahana nataoko fa 10 minitra no nanaovako izany. MANKASITRAKA
Virginia dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro, manaraka ny dingana aho, fa rehefa mahazo ny solonanarana sy ny teny miafina aho dia milaza amiko fa tsy marina izany ary tsy afaka mifandray amin'ny pc an'ny birao aho.
Valiny amin'i VIRGINIA
Rafa Palacios dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro ary misaotra betsaka anao tamin'ity lahatsoratra ity:
Manana pro book mac taloha aho, izay tsy ahafahako mametaka OS El Capitan (10.11) vao haingana ary noho izany dia tsy hamela ahy hahazo sy hametraka ny Remote Desktop (and. 10.3) ny Apple Store. Manandrana mitady fampidinana ny kinova taloha an'ny programa voalaza (Remote Desktop 8.0.44) fa tsy vitako.
Raha afaka manampy ahy ianao dia tsara izany.
Valiny tamin'i Rafa Palacios
Salama! Manana olana mitovy amin'i Rafa aho, mila kinova taloha amin'ny birao lavitra aho.
Salama, raha ny amiko dia tsy mandeha amiko io satria rehefa manandrana mampifandray dia manome kaody hadisoana 0x204 amiko. Tsy mangataka akory ny solonanarana sy ny teny miafin'ny solosaina ho avy.
Fantatrao ve izay mety hitranga?
Misaotra sy tsara indrindra.
Olana mitovy amin'i Mar, fantatrao ve raha misy ny vahaolana?
Tsara izany zavatra izany ihany no mitranga amiko raha tsy mandeha amiko ilay izy satria rehefa manandrana mampifandray dia manome kaody hadisoana 0x204 amiko. Tsy mangataka akory ny solonanarana sy ny teny miafin'ny solosaina ho avy.
FACUNDO dia hoy izy:
Salama! Manana an'ity olana manaraka ity aho, raha mampiasa Microsoft Remote Desktop avy amin'ny MAC misy ny fifandraisana an-trano WIFI aho dia tsy mandeha izany.
Ankehitriny, raha mampiasa azy amin'ny alàlan'ny Internet omen'ny findaiko aho dia mifandray tsy tapaka amin'ny solo-sainako.
Fantatrao ve ny mety ho olana?
Valiny amin'i FACUNDO
Ahoana ny fisafidianana ny singa rehetra ao anaty fampirimana amin'ny Mac miaraka amina fanalahidy tsotra
Ho hitantsika ny maodelin'i Mac miaraka amina processeur tokana?